ယော်ဒန်မြစ် Pickford ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ United Kingdom ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကစားသမားများ ယော်ဒန်မြစ် Pickford ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "ဇီဇာ"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယော်ဒန်မြစ် Pickford ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ဆီသို့ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်များစွာသော OFF နှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကို ON-အသံနည်းနည်း-လူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကိုအင်္ဂလန်ပထမရွေးချယ်မှုဂိုးသမားအဖြစ်ကြီးစိုးရန်သူ၏မြင့်တက်အကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့သောငါတို့ယော်ဒန်မြစ် Pickford ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
ယော်ဒန်မြစ် Pickford ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
ယော်ဒန်မြစ် Lee က Pickford ဝါရှင်တန်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်မတ်လ7၏ 1994th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သူကသူ့မိခင်, ဆူး Pickford (ကအိမ်အကူ) နှင့်သူ၏ဖခင် Lee က Pickford (ကဆောက်) အားမွေးဖွားခဲ့ပါသည်။
ရှစ်၏တစ်ဦးကုန်ကြမ်းကလေးစစ်သားတအဖြစ်သူ၏မြင့်တက်, ပထမဦးဆုံးအသင်းအဆင့်တဆင့်နဲ့ကျော်လွန်ပြီးလူအပေါင်းတို့သည်လမ်း ပတ်သက်. ဝါရှင်တန်ဖွားအဆို့ဆွေးနွေးပွဲ၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်။
ကြီးပြင်း Pickford Newminster ကက်သလစ်ကျောင်းရဲ့စိန့်ရောဘတ်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူကသူတို့ရဲ့အမြင့်များအတွက်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြသူအပေါင်းတို့သည် 8 နှစ်ပေါင်းကြားရှိတို့တွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းမှာသူတစ်ဦးဂိုးသမားဖြစ်ခြင်း, အထူးသဖြင့်ဘောလုံးကစားခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ မိမိအကျောင်းတွင်လူငယ်အသင်းများအတွက်ဂိုးသမားအနေအထားကစားပြီးနောက်သူ့မိဘသောအခါထိုနေဆဲအသက်အရွယ် 8 မှာဆန်းဒါးလန်းရဲ့အကယ်ဒမီမှာသူ့ကိုစာရင်းသွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
"သင်ကသူတို့ရဲ့အမြင့်အကဲဖြတ်နေသကဲ့သို့သင်တို့အားလုံးရှစ်နှစ်အရွယ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ။ သငျသညျ, သူတို့ကအားကစားနေထွက်ရှာအမြန်, ဒါပေမယ့်အားလုံးညာဘက်တည်ဆောက်ရှိသည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ် - ဂျော်ဒန် Pickford သူအပေါငျးတို့အမှုအရာရှိခဲ့ပါတယ်။
ဂိုးသမားရွေးချယ်စရာပြီးသားလူငယ်အကယ်ဒမီချေးငွေအပေါ်သူ့ကိုပို့ပေးချင်တယ်, ထဝကွသိရဘဲလျက်။ သူတို့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သည်သူ၏အသက်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကချေးငွေအပေါ်သူ့ကိုထွက်ပေးပို့ဖို့တွန့်ဆုတ်ရှိကြ၏။ သို့သော် Pickford မကြောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကခြောက်လချေးငွေစုစုပေါင်းအပေါ်သွားလေ၏။ ဤရွေ့ကားချေးငွေများခက်ခဲများနှင့်အလျှော့ခဲ့ကြပေမယ့်လူတစကလေးလေးကိုဖွင့်ကူညီပေးခဲ့သည်။
Pickford သူဖြစ်ခဲ့သည်နေရာတိုင်းမှာအကောင်းလူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ဂိုးသမားသည်အသက်အုပ်စုများမှတဆင့်တိုးတက်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ကာလအချိန်အားဖြင့် Pickford သူပြီးသား 100 ဦးပထမဦးဆုံးအဖွဲ့ကဂိမ်းထက်ပိုခဲ့သည်သူ၏ဆန်းဒါးလန်းပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။ "သင်၏အကြိုက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဒါဝိဒ်သည်ဂျိမ်း or ဒါဝိဒ်သည် Seaman"သူတို့ကငယ်ရွယ်အိမ်အပြန်မှာခဲ့ကြသည်သူတို့ 20 သို့မဟုတ် 21 ခဲ့ကြသည်အချိန်ကိုအသုံးပြုပုံသူတို့ 100 ဂိမ်းနဲ့တူတစ်ခုခုကစားခဲ့သည် Prudhoe, Pickford ရဲ့လူငယ်အသင်းနည်းပြကဆိုသည်။
2011 ခုနှစ်, Pickford ကလပ်နှင့်အတူသူ၏ပထမဦးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တိုးတက်သူမကြာခဏဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖီးလ် Barnes များအတွက်တစ်ဦးအဖုံးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သူစင်ကြယ်သောစာရွက်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်အထူးချွန်စွမ်းရည်ကိုသင်ယူခဲ့တယ်။
စင်ကြယ်စာရွက်စံချိန်ဇွန်လ 15 ၏ 2017th နေ့၌တစ်ငါးနှစ်စာချုပ်အပေါ်သူ့ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသူအဲဗာတန်သတိပေးခံရ။ သူ့ကိုသမိုငျးတှငျတတိယစျေးအကြီးဆုံးဂိုးသမားအပေါင်းတို့နှင့်အချိန်စျေးအကြီးဆုံးဗြိတိန်ဂိုးသမားအောင် add-ons ကြောင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်£ 30 သန်း၏ကနဦးကြေး။
ယော်ဒန်မြစ် Pickford ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
သူတို့ 14 ခဲ့ကြသည်ကတည်းက Pickford သူ့ရဲ့ကလေးဘဝရည်းစား Megan Davison နှင့်အတူရှိခဲ့ပြီးနှင့်သူအဲဗာတန်ပူးပေါင်းလာသောအခါသူနှင့်အတူလီဗာပူးလ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
မှန်မှန်အဖြစ်သူ့ကိုဖော်ပြထားတယ်သူကို Megan, "bae" Instagram ကိုအပေါ်အမြဲတမ်းသူမ၏ယောက်ျားသည်အားဖြင့်ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ သူမသည်တက္ကသိုလ်ဒုတိယအတန်းအစားအထက်ပိုင်းဒီဂရီနှင့်အတူဘွဲ့ရသည်။ နှစ်ဦးစလုံးချစ်သူများကမ္ဘာတဝှမ်းပုံမှန်ရုံးပိတ်ရက်, အထူးသဖြင့်ဘဟားမားအပေါ်သွားကြဖို့ကြိုက်တယ်။
ယော်ဒန်မြစ် Pickford ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
ယော်ဒန်မြစ် Pickford သည်သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအောက်ပါ attribute ကိုရှိပါတယ်။
ယော်ဒန်မြစ်ရဲ့အားသာချက်များ: , သနားကြင်နာတတ်တဲ့အနုပညာအလိုလိုသိ, နူးညံ့သိမ်မွေ့, ပညာရှိ, ဂီတ
ယော်ဒန်မြစ်ရဲ့အားနည်းချက်များ: အဖြစ်မှန်မှလွတ်မြောက်ရန်ကြောက်, အလွန်အမင်းယုံကြည်စိတ်ချ, ဝမ်းနည်းဖွယ်, အလိုဆန္ဒ, တစ်သားကောင်သို့မဟုတ်တစ်အာဇာနည်နိုင်ပါတယ်
အဘယ်အရာကိုယော်ဒန်မြစ် likes: တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်း, အိပ်, ဂီတ, အချစ်ဇာတ်လမ်း, အမြင်အာရုံမီဒီယာ, ရေကူး, ဝိညာဉ်ရေးရာ themes များ
ယော်ဒန်မြစ်နှစ်သက်မှုမရှိကဘာလဲ: ဝေဖန်ခံနေရသူတို့သိ-It-အားလုံးတောင်းဆိုသူများသည်, အတိတ်သူ့ကိုနှင့်မဆိုကြင်နာ၏ရက်စက်မှုသရဲခြောက်သောပြန်လာမယ့်
ယော်ဒန်မြစ်ကိုအလွန်ဖော်ရွေနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ရယ်မောခြင်းဒါပြည့်ဝ၏။ ထိုကြောင့်သူသည်မကြာခဏအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုး၏ကုမ္ပဏီအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့တွေ့။ ယော်ဒန်မြစ်ကိုသူအမြဲဘာမှပြန်ရရှိရန်မျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲ, တခြားသူတွေကိုကူညီဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ပါသည်, ကြိုးဖြစ်ပါတယ်။
ယော်ဒန်မြစ် Pickford ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
ယော်ဒန်မြစ် Pickford တစ်လူလတ်တန်းစားဗြိတိန်မိသားစုနောက်ခံကနေလာပါတယ်။ လတ်တလောအစီရင်ခံစာနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Lee ကအဘို့ဤအရပ်မှအကြောင်းပြချက်, အာရှကနေသူ့မိသားစုကိုနက်ရှိုင်းသောဇာစ်မြစ်ကိုဖျောပွ။
ယော်ဒန်မြစ်ကိုအမြဲတမ်းသူ့မိခင်ကပြင်ဆင်ကြက်သားနှင့်ခေါက်ဆွဲကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ သူ့မိသားစုများ၏ sharpest အမှတ်တရများတစ်ခုမှာသူ့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌တူညီသောအစားအစာ (ကြက်သားနှင့်ခေါက်ဆွဲ) နဲ့ non-လိဂ်ခိုင်ခိုင်လုံလုံဖို့ဦးတည်သည်, မိမိမိဘများ၏ကားတစ်စီး၏နောက်ကျောများတွင်ဖြစ်ခြင်းပါဝငျသညျ။ သူ၏စကားအတွက် ...
''ငါ ', ဂိမ်းများ, ငါ့အဖေ, Lee ကအဘို့အ Alfreton သွားရောက်ချင်ပါတယ်မောင်းထုတ်မယ်လို့ Pickford ကပြောပါတယ်။
သူကဆက်ပြီး ... 'ငါနောက်ကျော၌ငါ့ Pre-ပွဲစဉ်သည်ဘောဇဉ်ကိုစားချင်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ mum, ကြက်သားနှင့်ခေါက်ဆွဲကိုသူမတစ်ဦးစည်ပိုင်းထဲမှာကပ်ချင်ပါတယ်။ ငါကလည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခဲ့မသေချာဘူးဒါပေမယ့်နေသမျှကာလပတ်လုံးငါကအားလုံးလက်ျာဘက်ကြီးပွဲလူလာပြီခံခဲ့ရသည်အဖြစ်!။ အမှုအရာစနေနေ့အပေါ်ငါ့အဘို့ကွဲပြားခြားနားရ။ ငါဆိအခါအကြှနျုပျ၏မိခင်, ဆူး, တစ်ဦးတက္ကစီအတွက်လေ့ကျင့်ရေးမှငါ့ကိုယူလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးဆောက်မူသောငါ့အဖေတစ်ဦးစနေနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရသည်တဲ့အခါဒီဖြစ်ပျက်။ "
အစ်ကို: သူ့အစ်ကို, ရစ်ချတ် Pickford တစ်ဂိုးသမားဖြစ်လာမှလမ်းကြောင်းအပေါ်သူ့ကိုသတ်မှတ်ထားခဲ့သောသူဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကလေးတွေသောအခါနှစ်ဦးစလုံးအတူတကွဘောလုံးကစားခဲ့ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲရစ်ချတ်ထိပ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂိမ်း၌သူ၏ကံမကောင်းသောအတှေ့အကွုံထိပ်တက်ပြီးနှင့်အင်္ဂလန်နည်းပြအောင်ကသူ၏ရည်မှန်းချက်ဖြည့်ဆည်းရန်သူ၏ငယ်ရွယ်သောမှေးခငျြးရဲ့သန်နိဋ်ဌာနျထက်မြက်ဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ဂါရတ် Southgate အထံတော်၌အသိပေးစာယူပါ။
ယော်ဒန်မြစ် Pickford ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိဘများဟာသဖြစ်ခဲ့သည်တက် Call TOT
ဘယ်အချိန်မှာ Burnley ရဲ့တွမ် Heaton ရှေ့ဆလိုဗေးနီးနှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ၏လေ့ကျင့်ရေးဦးဒဏ်ရာရပြီးနောက် Pickford အကြီးတန်းကစားသမားမှတက်ကိုခေါ်တယ်။ ဤသည်ကသူ၏အိပ်မက်အင်္ဂလန်ခေါ်ဆိုမှုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဇာတ်လမ်းကို၏ Pickford ရဲ့အကောင့်ဖြစ်၏ ငါ '' တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဆင်းရ, သင်တက်ကိုခေါ်ပြီ 'ဖုန်းပေါ်မှာပြောသည်သောအခါ "ငါသည့် Mam နှင့်အဖေ၏အိမျသို့ဆွဲခဲ့သည်။ ငါ buzzing ခဲ့သည်။ ငါ '' Mam, ငါယခုဆင်းတယ်, အင်္ဂလန်နှင့်အတူထွက်သွားမယ်, ကိုယ့်ဖုန်းခေါ်ဆိုခခဲ့ပြီးပြီ '' ဟုပြောသည်။
"သူမဟာ သွား. , '' အဘယ်သူမျှမသင်မဟုတ်ပါဘူး '- သူမကငါသူမ၏တက်အကွေ့အကောက်များသောနောက်တဖန်တစ်ဦးဂျိုကာဖြစ်ခြင်းခဲ့သည်ထင်! ကိုယ်ကသာအတိုကာလခဲ့ပေမယ့်တိုင်းပြည်အတွင်းအကောင်းဆုံးကစားသမားနှင့်အတူသူတို့အားနှစ်ညပျောက်ဖြစ်ခြင်းအကြီးအကျယ်သင်ယူမှုအတှေ့အကွုံခဲ့သညျ။ "
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယော်ဒန်မြစ် Pickford ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!။
အဲလက်စ် Oxlade Chamberlain ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Jonjo ရှယ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Kyle Walker က-Peters ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ရုဗင် Loftus-ချီးစကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဒန်နီရို့စကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်